Thola amabhishi amahle kakhulu kuma-Azores | Izindaba Zokuhamba
Amabhishi amahle kakhulu e-Azores
USusana Garcia | | General, Iziqhingi, Portugal
El iqoqo leziqhingi lama-Azores, elasePortugalYindawo yokuphupha, indawo yeholide ehlala imangaza njalo. Iqembu leziqhingi eziyisishiyagalolunye zasePortugal eziphakathi nolwandle i-Atlantic, ezakha ingxenye yalokho okwaziwa ngokuthi yiMacaronesia. Iziqhingi eziyinhloko zaseSud yiSâo Miguel neTerceira, noma ungajabulela ukuphunyuka okuhle kwezinye. IGraciosa, iPico noma iFaial ngezinye zeziqhingi zayo.
Ku Ama-Azores sizothola amakhilomitha ogwini ukwazi ukujabulela amabhishi alo amahle. Abavakashi bathutheleka kulezi ziqhingi ngenxa yezizathu eziningi, kodwa ngaphezu kwakho konke ngenxa yokuthi izindawo zabo zomhlaba zaziwa njengezihle kakhulu. Kunemizila yokuhamba izintaba, izindawo ezibukeka kahle ezigcwele uhlaza, amadolobha namadolobha anomlando omningi futhi amabhishi alo, esizogxila kuwo.
1 I-Mosteiros Beach (Sâo Miguel)
2 IFormosa Beach (iSanta María)
3 Ibhishi laseSanta Bárbara (Sâo Miguel)
4 I-Porto Pim Beach (Faial)
5 ICaloura Beach (Sâo Miguel)
6 I-Silveira Beach (Terceira)
7 Ibhishi laseFajâ da Caldeira de Santo Cristo (eSâo Jorge)
I-Mosteiros Beach (Sâo Miguel)
Lolu lolwandle lusenyakatho-ntshonalanga yesiqhingi. Njengoba umsuka weziqhingi uyintaba-mlilo, kuyinto ejwayelekile ukuthi sithola amabhishi amaningi anesihlabathi esimnyama. Ingabe Ibhishi ligqamile ngoba mhlaka mude ungabona iziqhingana eziningana eyaziwa ngokuthi amadwala e-Mosteiros, afaka intelezi ethile kuzwe. Lawa ma-monoliths wentaba-mlilo avela olwandle anezimo ezingenasisekelo, ezibunjwe isenzo samanzi nomoya. Lolu lwandle lunamathafa amahle namanzi acwebile, futhi lunezinsizakalo ezithile njengokupaka.
IFormosa Beach (iSanta María)
Esiqhingini saseSanta María singathola amabhishi ahlukile kulawo avame ukubonakala kuzo zonke iziqhingi zase-Azores, ezivame ukuba nesihlabathi esimnyama futhi zibe nomoya namagagasi. Kepha ku ISanta María sinamabhishi afana neFormosa, anesihlabathi segolide futhi imvamisa iba nomoya omnandi, okwenza ikhange kakhulu. Akulona ibhishi elibanzi kakhulu, kepha isihlabathi salo sanele ukuthi sikwazi ukuchitha usuku oluhle olwandle sigeza emanzini alo ahlanzekile futhi amhlophe. Uma sifuna ukwazi ukubona ulwandle lonke singakhuphukela eMiradouro da Macela. Ukuvakasha kokuhamba izintaba kuvamile esiqhingini ukubabaza ubuhle bendawo.
Ibhishi laseSanta Bárbara (Sâo Miguel)
Leli bhishi lisendaweni esenyakatho-maphakathi nesiqhingi sentaba-mlilo. Ngokukhethekile kufayela le- Ribeira Seca town futhi iyindawo enesihlabathi esiyikhilomitha elilodwa. Awekho amabhishi amade kakhulu kulesi siqhingi, ngakho-ke lesi ngesinye sezikhulu kakhulu. Kuyo, njengakwezinye iziqhingi eziningi, kunezimo ezifanele zokuzijwayeza imidlalo efana nokuntweza olwandle, i-kitesurfing noma ukushaywa ngumoya, yingakho abagijimi abaningi abakhetha ukujabulela imidlalo abayithandayo. Kuyibhishi elidumile kulesi siqhingi, ngakho-ke futhi linemisebenzi eminingi enjengendawo yokudlala, imigoqo noma izindlu zangasese. Ngakho-ke wonke umndeni ungajabulela usuku olufanele lolwandle lapho wonke umuntu angaba nesikhathi esimnandi.
I-Porto Pim Beach (Faial)
Leli bhishi liyi- olwandle olunesihlabathi esimhlophe, into engajwayelekile eziqhingini. Itholakala eduze kwedolobhana lokudoba futhi yize ingenkulu kakhulu imvelo iyenza indawo ethokomele nenhle kakhulu. Indawo enhle yokubhukuda i-snorkel, ngoba singabona izinhlanzi eziningi.
ICaloura Beach (Sâo Miguel)
ICaloura igama lomzana omncane wokudoba esiqhingini. Lesi siqhingi sase-Azores nezinye eziningi sinamachibi emvelo amahle kakhulu akhiwe endaweni idwala lentaba-mlilo elenza amabhishi amangalisayo futhi ahlukile. Lesi ngesinye seziheho ezikhethekile eziletha abantu kulesi siqhingi minyaka yonke. Sinebhishi elincane elinamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka okugeza futhi ngasogwini kunechibi elihle lemvelo elifanele ukugeza. Elinye lalawo mabhishi agqame ngokukhethekile kwawo.
I-Silveira Beach (Terceira)
Lesi ngesinye seziqhingi ezinkulu, ngakho azishodi izindawo zokugeza. Leli bhishi liseduze ne-Angra do Heroismo. Akulona kahle ulwandle lwemvelo, kepha ulimi lukakhonkolo olungena emanzini futhi inikeza indawo yokugeza. Njengoba izindawo ezizungezile zinamadwala, lena yindawo ethandwa kakhulu yokugeza.
Ibhishi laseFajâ da Caldeira de Santo Cristo (eSâo Jorge)
Ukuqonda ukuthi lolu lwandle lunjani, kufanele sazi ukuthi basho ukuthini ngegama elithi fajâ. Leli gama liza lichaze lawo mathafa akha ugu phakathi namakhulu eminyaka ngokususwa kodaka, okwenza kube namachibi amancane entaba-mlilo azungezwe uhlaza namaxhaphozi. Ukusuka endaweni ephakeme uyabona ukuthi kunwebeka kwemithambeka yezintaba-mlilo. Lesi siqhingi sinemichilo eminingi futhi lesi ngesinye sezihle kakhulu. Ukuze ufike lapho, kufanele udabule i-Nature Reserve emzileni okhuphukayo ukuze ufike endaweni yasolwandle, lapho sizobona khona ezinye izindlu ze-surf ukuqala noma ukuqhuba lo mdlalo. Kukhona nolwandle lwamatshe amnyama namatshe nolwandle oluhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Amabhishi amahle kakhulu e-Azores
UCerro del Hierro